Featured News :: Nepal News, Nepali Samachar | UJYAALO ONLINE :: Nepal News, Nepali Samachar
Thu, Feb 25, 2021 | 00:03:03 NST
भूमाफियाको नयाँ रणनीति : कित्ताकाट रोकिएपछि श्रीमान्–श्रीमतीमै अंशबण्डा
सरकारले जग्गा प्लटिङ गरी खण्डिरकण गर्न रोक लगाए पनि दैनिकजसो जग्गा प्लटिङ गर्दै खण्डिकरण भइरहेको छ ।
अहिले छ्या! बागमती, दुई वर्षपछि वाह! बागमती
‘छ्या कस्तो फोहोर’ बागमती नदी देख्ने बित्तिकै धेरैले नाकमुख थुन्छन् । हिन्दु धर्मशास्त्रमै उल्लेख गरिएको तथा काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता रहेकाे बागमती नदी बहनै नसक्ने गरि फोहोरले भरिएपछि यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन अभियान नै चलिरहेको छ ।
वैशाख १९ बन्ला त वाम एकताको नयाँ ‘साइत’ ?
काठमाडौं, वैशाख ८ – चुनावी तालमेल मात्र होइन पार्टी नै एक बनाउने भनेर एमाले र माओवादीले गरेको घोषणा आधा वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
पाइलटले अवस्था बुझेन भने...
विहीबार राती १ सय ३३ जना यात्रु बोकेर काठमाडौंबाट मलेसियाको लागि उड्नुअघि गुढिरहेको मालिन्दो एयरको विमान चिल्लिएर घाँसे मैदानमा पुग्यो । विमान ठूलो दुर्घटना हुनबाट बच्यो ।
राष्ट्र बैंकको सीमा निर्धारण : प्रविधिको जमानामा परम्परागत काम
काठमाडौं, वैशाख ७ – झापाको भद्रपुरका लागि काठमाडौँबाट एकतर्फी जहाजको टिकट ९ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
हिमाल आरोहणका लागि ३ सय ८३ जना आरोही आधार शिविरमा
हिमाल आरोहणका लागि दर्ता गराएका ४० समूह मध्ये ३३ समूहका ३ सय ८ जना सगरमाथा आरोहणदलका सदस्य रहेका छन् । यस्तै, ल्होत्से हिमाल आरोणका लागि ६ समूहका ६४ जना र नुप्त्से हिमाल आरोणका लागि १ समूहका ११ जना आरोहण दलका सदस्य रहेका छन् ।
काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी : भाषणमा उहिल्यै, यथार्थमा बल्ल पूरा हुने छाँट
पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएर देशमा भर्खरै बहुदल आएको थियो । राजनीतिक दल आआफ्ना कार्यक्रम गर्न स्वतन्त्र बनेका थिए ।
१८ वर्षपछि घर फर्कँदा ६ जना छोराछोरीसहित श्रीमतीलाई अर्कैसँग भेटेपछि...
उनले म हिरा होइन भन्दै थिए रे ! तर, तिमी नै हिरा हौ । तिम्रो श्रीमती–आमा मात्रै घरमा छन् । उनीहरु तिम्रो प्रतिक्षामा छन् । तिम्रो बाटो हेरेर बसेका छन्, ५-६ वर्षमा नै कस्तो घर भुलेको ? भनेर उनलाई मेरो घर फर्काएछन् ।
तपाईँको एटीएम कार्ड कति सुरक्षित ?
विशेषगरी सपिङ मलहरुबाट कार्ड ह्याकिङका घटना धेरै हुने गरेका छन् । यसलाई रोक्न पनि चिप कार्ड महत्वपूर्ण हुन्छ । डूअल अथेन्टिकेसन अप्सन भएकाले चिपमा आधारित कार्डमा पीओएस मेसिनमा कार्ड स्वाइप गरेपछि पनि पिन कोड हाल्नु पर्छ ।
२०७५ विकास र समृद्धिको वर्ष होला ?
नयाँ वर्ष २०७५ को झुल्के घामसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रकृतिको रमणीय स्थान राराबाट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी दिन विकास र समृद्धिको रहने घोषणा गर्नुभयो ।
​बित्यो ओलीको दुई महिना : ‘सपना’ कार्यान्वयनको जग बसाल्ने कहिले ?
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीको दुई महिना पूरा भएको छ । गएको फागुन ३ गते दुई तिहाइ बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो ।
माओवादी एमाले एकता : वाईसीएलले गरेको खबरदारीको संकेत के ?
आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग वाइसिएलका पदाधिकारीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटे र भने, ‘५०/५० को हैसियत नभएसम्म र एमालेले जनयुद्ध स्वीकार नगरेसम्म पार्टी एकता गर्न नहतारिनुहोला ।’
जिब्रो छेडेर टोलटोल घुमे बुद्धकृष्ण (फोटोफिचर)
विस्केट जात्रामा मनाइने थिमी बोडेको प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रामा आइतबार दिउँसो थिमी बोडे – ८ का ४६ वर्षीय बुद्धकृष्ण वागश्रेष्ठले जिब्रो छेड्नु भयो ।
मेलम्ची : १६ वर्षमा २६ किलोमिटर सुरुङ
सबैभन्दा कठिन कामको रुपमा हेरिएको सुरुङ खन्ने काम सकिएसँगै ब्यग्र प्रतिक्षारत काठमाडौंका बासिन्दाको वर्षौँदेखिको मेलम्चीको पानी पिउने सपना अब छिट्टै पूरा हुने भएको छ ।
​प्रदेश १ र ५ को बजेट आइसक्यो अरु प्रदेश सरकार के गर्दैछन् ?
सातवटै प्रदेश सरकारले चैतभित्रै बजेट ल्याउने भने पनि १ र ५ बाहेकका अरु प्रदेशको बजेट अझै आउन सकेको छैन ।
सिरुवा पर्व : यसरी सुरु भयो गोठ र छानामा लसुन झुड्याउने परम्परा
झापा, वैशाख १ – नयाँ वर्षको आगमनसँगै सिरुवा पर्वको रौनक राजवंशीलगायत कोच आदिवासी समुदायमा छाएको छ ।
जात्रामय बन्यो भक्तपुर
नयाँ वर्षको दिन भक्तपुरमा मनाइने प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा हेर्ने आउनेहरुको घुइँचो लागेको छ ।
डीपीएल क्रिकेट : आयोजना, सफलता र उपलब्धि
घरेलु क्रिकेटलाई नयाँ रुपमा सोच्न र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको धनगढी प्रिमियर लिग डीपीएल क्रिकेटको दोस्रो सस्करण शुक्रबार सकिएको छ ।
कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष : सुनखानीमा बसेर नुन खोज्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ?
चिसो हावा मन्द गतिमा सिरसिर चलिरहेको । अनि नीलो पानीले भरिएको तालमाथि टपक्क टिपेर राखेको जस्तो देखिने सेताम्मे हिमाल । एक छेउदेखि देखिने अर्को छेउ पुग्न घण्टौं लाग्छ ।
राराबाट प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : ऋषिमुनिका सन्तानले पढ्न नपाउने ? (पूर्णपाठसहित)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बृद्धि र प्रगतिको सपना देख्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नयाँ वर्षको अवसरमा रारा तालबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका योजना कतिपयलाई अपत्यारिलो जस्तो लागे पनि सपना र उच्च आकांक्षा नभई विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
विक्रम सम्बत २०७५ सुरु, कस्तो छ त नयाँ वर्षको ज्योतिषीय दृष्टिकोण
आज विक्रम संवत २०७५ सालको पहिलो दिन । सूर्यले मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग सुरु गर्ने मानिने दिन आज बैशाख सङ्क्रान्ति अर्थात मेष सङ्क्रान्ति पनि हो । नयाँ बर्षको पहिलो दिन अघिल्लो वर्ष गरेका कामको मूल्याङ्कन गरी सफलताकालागि प्रयत्न गर्ने सङ्कल्प पनि गर्ने गरिन्छ ।
चीन जोड्ने छोटो दूरीको सडक खुल्यो
चीनसँगको व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
वर्षभरी नै चुनाव : कम्युनिष्टलाई हाइहाई, कांग्रेसलाई बाइबाई
काठमाडाैं, चैत ३० – धेरैथरी आशा र सम्भावना छोडेर २०७४ साल बिदा हुँदैछ । बिदा हुनै लागेको २०७४ निकै महत्वपूर्ण र सम्झनलायक वर्ष भयो । यसै वर्ष संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीयताको अभ्यास भयो ।
नयाँ वर्ष सुरु हुनै लाग्यो । नयाँ वर्षलाई नयाँ उत्साह, खुशी अनि उर्जा बटुल्ने अवसरका रुपमा स्वागत गर्ने तयारी धेरैजनाको हुन्छ नै ।
नयाँ वर्षमा कहाँ घुम्न जाने ?
जाडो मौसम सकिएर गर्मी सुरु भएको छ । घुमफिर गर्नका लागि यतिबेलाको मौसम उपयुक्त मानिन्छ ।
क्रिकेटकाे यस्ताे नशा : बसकाे टिकट काट्न छाेडेर डीपीएलकाे टिकट
उहाँ सामानसहितको साइकल मैदानबाहिर रुखमा बाँधेर क्रिकेट हेर्न पुग्नुभएको थियो । उहाँ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो ‘हामी सुदूरपश्चिमेलीको लागि त क्रिकेट भनेको भोक भइसक्यो, जसरी पनि भोक नमेटी भएन भनेर मैदान आएको हो ।’
यसरी ल्यायो १ नम्बर प्रदेश सरकारले पहिलो बजेट
मोरङ, चैत २९ – प्रदेश नम्बर १ को सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट संसदमा पेश गरेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल किन सँधै रद्दीको सूचीमा ?
सार्वजनिक गाडी र बसपार्कको भद्रगोल र बेथीतिको कुरा त गरिसाध्य नै छैन । विमान र विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तैउस्तै छ । बरु बसपार्कबाट समयमा गाडी छुट्लान् तर विमानस्थलबाट समयमा जहाज उड्लान भन्ठान्नु बेकार हुन थालेको छ ।
जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा : खारेज हुने र नहुने कार्यालय कुन कुन ?
जिल्लास्तरका झण्डै दुई दर्जन सरकारी कार्यालय आजदेखि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ ।
​किन गर्यो कांग्रेसले श्वेतपत्रको विरोध ?
सरकारले यथार्थपत्र भन्दै देशको आर्थिक गतिविधिको जानकारी गराउन जारी गरेको ‘श्वेतपत्र’लाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘लालपत्र’को संज्ञा दियो ।
सुरु भयो भक्तपुरमा बिस्केटजात्राको रौनक
भक्तपुर चैत २७ – भक्तपुरमा विस्केट जात्रा सुरु भएको छ ।
मेलम्चीमा ऐतिहासिक उपलब्धि : सकियो सुरुङ खन्ने काम, दसैँमा धारामा पानी आउने पक्का
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने मुख्य काम सकिएको छ । आयोजनाका अनुसार पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाको दैनिक १७ करोड लिटर पानी दसैँसम्म काठमाडौं आउनेछ ।
​आहा ! मनै लोभ्याउने पेन्गुइनको संसार
चैत २७ – जलवायु परिवर्तनको संकट झेलिरहेको अन्टार्कटिकाको सुन्दरता कस्तो देखिन्छ ?
​जताततै रेलमार्गको कुरा : साँच्चै कुद्ला र नेपालमा रेल ?
काठमाडौं, चैत २६ – पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रेल चलाउने भन्दा धेरैले ठट्टामा उडाए ।
एकतामा आधा – आधा अनुपात : सहअस्तित्वको खोजी कि एकताबाट भाग्ने नियत
माओवादी केन्द्रले केन्द्रमा बराबरी अर्थात आधाआधाको आधारमा मात्र पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव राखेपछि एमाले माओवादी एकता प्रकृयामा नयाँ ट्वीष्ट आएको छ ।
ओली र मोदीले उद्घाटन गरेको आईसीपीबाट नेपाललाई के फाइदा ?
भन्सारमा पनि छिटो र छरितो रुपमा सामानाको जाँचपास हुनेछ । कम्प्युटराइज्ड प्रणालीले जाँचपास हुने भएकोले धेरै समय लाग्दैन । हाइटेक प्रविधियुक्त आईसीपी कसरी संचालन हुन्छ भन्ने प्रश्न व्यवसायीहरुको मनमा उठेको छ ।
किन गरिन्छ ‘वान टु वान’ वार्ता ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा 'वान टु वान' वार्ता शब्दले निक्कै चर्चा पायो । औपचारिक भ्रमणमा गएपछि वार्ता त हुन्छ नै । आखिर औपचारिक वार्ता र वान टु वान वार्तामा भिन्नता चाहिँ के छ त ?
ओलीको भारत भ्रमण : निरन्तरतामा क्रमभङ्ग
काठमाडौँ, चैत २४ – नेपालमा प्रधानमन्त्री चयनभएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यता तोड्न नसकेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही कुरामा भने निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्न सफल हुनुभएको छ ।
अरुण तेस्रोको उद्घाटन भएन, भेटपछि ओली र मोदीले के भने ?
काठमाडौं, चैत २४ – भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत–सीमामा रहेको वीरगञ्ज–रक्सौलमा एकीकृत जाँच चौकी आईसीपीको संयुक्त उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
​सन्दीप भोलि आउने
विराटनगरबाट ४५ लाखसहित एक जना पक्राउ